Soo-saareyaasha Dheeraadka ah ee Nafaqada, Soo-saaraha Waxsoosaarka Nafaqada - Iibso Cuntooyinka Lagu Daro - Medicinerawmaterials.com
Dhagax cagaaran > Products > Cuntada Adduunka
Ku darista cuntada waxay leeyihiin saddexda astaamood ee soo socda: Marka hore, waa walxo lagu daro cuntada. Sidaa darteed, guud ahaan looma cuno sidii cunto kaligeed ah. Marka labaad, waxay ka kooban yihiin walxo dabiici ah iyo kuwo dabiici ah. Saddexaad, ku darista cuntooyinka ayaa looga dan leeyahay in lagu wanaajiyo tayada cuntada iyo midabka, carafta, dhadhanka, iyo baahida loo qabo antisepsis, ilaalinta iyo farsamooyinka farsamaynta!
Liiska Cuntada lagu daro
Waxyaabaha lagu daro cuntada guud ahaan waxaa loo qaybiyaa dhowr nooc oo ah kuwa soo socda.
Walxaha ilaaliya - badanaa loo isticmaalo waa sodium benzoate, potassium sorbate, sulfur dioxide, lactic acid iyo wixii la mid ah. Waxaa loo isticmaalaa in lagu farsameeyo cuntooyinka sida saxmada iyo miraha la keydshay.
antioksidanter - oo la mid ah walxaha ilaaliya, ayaa dheereyn kara cimri dhererka cuntada.
Wakiilada midabaynta - midabbada synthetic ee sida caadiga ah loo isticmaalo waa carmine, amaranth, liin jaalle, indigo iyo wixii lamid ah. Waxay beddeli kartaa muuqaalka cuntada si kor loogu qaado cuntada.
Thickerers iyo xasilin - waxay hagaajin kartaa ama dejin kartaa astaamaha jirka ee cabitaannada iyo cuntooyinka qabow, taasoo ka dhigaysa muuqaalka cuntooyinka inay noqdaan kuwo jilicsan oo jilicsan.
Wakiilka khamiirka - ku darista wakiil khamiir nacnac iyo shukulaato qaar ka mid ah, waxay kor u qaadi kartaa wax soo saarka kaarboon dioxide ee jirka sonkorta, sidaasna ku dabcinaysa.
Macmacaanka - waxyaabaha macaan ee loo yaqaan 'synthetic sweeten' waxaa ka mid ah sodium saccharin, cyclamate, iwm. Ujeeddada ayaa ah in macaanka la kordhiyo.
Wakiilada dhanaan - cabitaannada qaar, nacnacyada badanaa waxay isticmaalaan walxo dhanaan si ay u hagaajiyaan una horumariyaan saamaynta carafta.
Nalalka - benzoyl peroxide waa maaddada ugu weyn ee lagu caddeeyo bur.
Kalluunka - Xawaashku waa isku darmareed, ama dabiici ah, oo leh noocyo badan oo udgoon ah.